Soo dejisan JoyToKey 6.3 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: JoyToKey
JoyToKey – software ah in ay ku daydaan hawlaha keyboard iyo mouse adigoo isticmaalaya ilaaliyaal ciyaarta. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay isticmaalaan joystick ah in la xakameeyo daalacashada, codsiyada xafiiska, ciyaaro iyo habka hawlgalka computer. JoyToKey u saamaxaaya in ay Customize oo ay la jaanqaadaan signal ah furaha keyboard badan iyo isu-gaynta iyagoo dhag badhamada qaar ka mid ah qofka xukuma ciyaarta. Sidoo kale JoyToKey u saamaxaaya in ay abuuraan profiles la gaynta kala duwan ee xukunka keyboard iyo mouse kuwaas oo si toos ah u gayso ee xawaaladaha ee codsiga la xiriira.
Signal dega Khayaadka oo Instant ah furayaasha
Management of codsiyada iyo ciyaaraha kala duwan
Meeshay of badhamada badan oo keyboard iyo isu-gaynta ay
Waxay abuurtaa profiles la gaynta kala duwan ee furaha
Soo dejisan JoyToKey
Faallo ku saabsan JoyToKey
JoyToKey Xirfadaha la xiriira